မဒေါင်းလုပ် EaseUS Data Recovery Wizard for Mac မအဘို့ Mac
မဒေါင်းလုပ် EaseUS Data Recovery Wizard for Mac
မပလက်ဖောင်း: Mac မဘာသာစကား: မအင်္ဂလိပ်
မအခမဲ့ မဒေါင်းလုပ် မအဘို့ Mac (10.20 MB)
မဒေါင်းလုပ် EaseUS Data Recovery Wizard for Mac,
Mac အတွက် EaseUS Data Recovery Wizard သည် Mac များအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသည့် ဖိုင်နှင့် ဒေတာပြန်လည်ရယူရေးဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ ဘေးကင်းပြီး အဆင်ပြေသော ပရိုဂရမ်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ၎င်းသည် သင်၏ Mac တည်ဆောက်ထားသော drives နှင့် storage devices များအားလုံးတွင် ပျောက်ဆုံးသွားသော၊ ဖျက်လိုက်၍ မရနိုင်သော ဒေတာများနှင့် ဖိုင်များကို ပြန်လည်ရယူရန် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ ဤဒေတာသည် ဓာတ်ပုံများ၊ ဂီတ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အီးမေးလ်များ၊ မော်ကွန်းတိုက်များနှင့် အခြားဖိုင်များ ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်၏ Mac ကွန်ပျူတာ၊ ပြင်ပဒစ်၊ USB ဒစ်ခ်၊ SD ကတ်၊ မန်မိုရီကတ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာနှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများမှ ပျောက်ဆုံးသွားသော သို့မဟုတ် ဖျက်လိုက်သော ဖိုင်များအားလုံးကို ပြန်လည်ရယူနိုင်သည့် ပရိုဂရမ်သည် အဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့် အလွန်လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤအဆင့်များအနက် ပထမဆုံးအချက်မှာ သင်ပြန်လည်ရယူလိုသော ပျောက်ဆုံးသွားသောဖိုင်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဖိုင်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပြီးနောက်၊ ပရိုဂရမ်သည် စကင်န်ဖတ်ခြင်း စတင်သည်။ စကင်န်ဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသောအခါ၊ သင်ရရှိသောရလဒ်များကြားတွင် လိုချင်သောဖိုင်ကို အစမ်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီး သေချာသောအခါတွင် သင်သည် ဖိုင်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ Mac ပိုင်ရှင်များအားလုံး လက်တွေ့ကျပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသည့် ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
ဖျက်လိုက်၊ ဖော်မတ်လုပ်ထားသည့် သို့မဟုတ် လက်လှမ်းမမီသောဒေတာကို လုံးဝပြန်လည်ရယူသည်။
၎င်းသည် သင်၏ Mac ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် သိုလှောင်မှုကိရိယာများမှ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂီတနှင့် အီးမေးလ်ဒေတာအများစုကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။
ပြန်လည်ရယူခြင်းမပြုမီ အစမ်းကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။
ဘေးကင်းခြင်း၊ ထိရောက်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း။
EaseUS Data Recovery Wizard for Mac မသတ်မှတ်ချက်များ
မဖိုင်အရွယ်အစား: 10.20 MB
Google Chrome ဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့လူကြိုက်များတဲ့အင်တာနက် browser တစ်ခုဖြစ်တယ်။ Google Chrome...
Firefox သည် open source internet browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ Mozilla...
မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံး browser တစ်ခုဖြစ်သည့် UC Browser သည်ယခင်ကကွန်ပျူတာများကို...
အိမ်နီးချင်းမင်္ဂလာပါ2Steam မှာ! Hello Neighbor2Alpha 1, PC...
PES 2021 Lite သည် PC အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခမဲ့ဘောလုံးဂိမ်းတစ်ခုရှာနေပါက eFootball...
Warp VPN 1.1.1.1 သည် Windows PC များအတွက်အခမဲ့ VPN ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ Cloudflare မှတီထွင်ထားသောအခမဲ့...
အကောင်းဆုံးလယ်ယာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဂိမ်း Farming Simulator...
KMSpico ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပြီးအခမဲ့ activate လုပ်ခြင်း၊ Office activation အစီအစဉ် KMSpico...
၂၀၁၃ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် PlayStation3နှင့် Xbox 360 တို့အတွက် GTA စီးရီးကိုဖန်တီးသူ Rockstar က...
FIFA 22 သည် PC နှင့် consoles များတွင်ကစားနိုင်သောအကောင်းဆုံးဘောလုံးဂိမ်းဖြစ်သည်။ EA Sports FIFA 22...
Secret Neighbour သည် PC ကွန်ပျူတာနှင့် mobile တို့တွင် stealth...
၎င်း၏ရိုးရှင်းသောနှင့်စတိုင်လ် interface နှင့်အတူ, Safari ကသင်၏အင်တာနက် browsing...
Drawboard PDF သည် Windows 10 ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့ PDF ဖတ်ရှုခြင်း၊ PDF...
လွတ်လပ်သောဂိမ်း developer Rovio မှထုတ်ဝေသော Angry Birds...
Tor Browser ဆိုတာဘာလဲ။ Tor Browser ဆိုသည်မှာအင်တာနက်လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုဂရုစိုက်ရန်၊...
McAfee Rootkit Remover သည်အသုံးပြုသူများအားသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပုံမှန်နည်းလမ်းများဖြင့်ထောက်လှမ်း။...
Bitdefender Antivirus Free သည်သင်၏ကွန်ပျူတာများတွင်အခမဲ့သုံးနိုင်သောအထိရောက်ဆုံး antivirus program...
အင်တာနက် Download Manager ဆိုတာဘာလဲ။ Internet Download Manager (IDM / IDMAN)...
Norton AntiVirus သည်ကွန်ပျူတာနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များ၊...
Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free) သည် Windows PC...
PUBG ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ PUBG သည်စစ်ပွဲဆင်နွှဲသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင် Windows...
Betternet VPN ပရိုဂရမ်သည် Windows operating system ရှိ PC...
ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးမာလ်တီမီဒီယာကစားသမားများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သော Winamp...
AVG Secure VPN သည် Windows PC (ကွန်ပျူတာ) အတွက်အခမဲ့ VPN software ဖြစ်သည်။ သင်၏ WiFi...